Duulimaadyadu waxay qani ku noqon doonaan dhibcahaaga duullimaad ee dhacaya
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Duulimaadyadu waxay qani ku noqon doonaan dhibcahaaga duullimaad ee dhacaya
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Ammaanka • Shopping • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka
Haddii aad baajisay ama beddeshay duulimaad labadii sano ee la soo dhaafay, hubso inaad sheegato qiimaha tigidhkaaga aan la isticmaalin kahor intaysan goori goor ahayn.
Shirkadaha diyaaradaha waxay ku fadhiyaan $ 10 Billion oo ah qiimaha tigidhka aan la isticmaalin haddana waqtigu wuu dhammaaday iyaga.
Markii COVID-19 uu joojiyay qorshihii safarka ee qof walba. shirkadaha duullimaadyadu waxay ballaariyeen joojinta iyo siyaasadaha dib -u -qorista.
Safarro badan oo beddelay ama joojiyay duulimaadyadii waxay leeyihiin dhibco safar oo laga soo saaray shirkadaha diyaaradaha oo laga yaabo inay si degdeg ah u dhacayaan.
In kasta oo shirkadaha duullimaadku ay si xun u garaaceen sannadka 2020, qaar badan ayaa qarka u saaran inay lacag badan ka helaan dhibcaha duulimaadyada ee socdaalayaasha. Sida wararku sheegayaan, diyaaradaha xamuulka qaada ayaa ku fadhiya $ 10 Billion oo ah qiimaha tigidhka aan la isticmaalin haddana waqtigu wuu dhammaaday.
Markii COVID-19 uu joojiyay qorshayaasha safarka ee qof walba, shirkadaha diyaaradaha ayaa ballaariyey baajinta iyo siyaasadaha dib-u-qorista. Dad badan oo isbeddelay ama duulimaadyada la joojiyay haystaan ​​dhibco safar oo laga soo saaray shirkadaha diyaaradaha oo laga yaabo inay si degdeg ah u dhacayaan. Waa tan sida loo hubiyo loona isticmaalo dhibcahaaga safarka kahor inta aysan goori goor tahay.
Hel Emailadaadii Hore
Haddii aad baajisay duulimaad, waxay u badan tahay in laguu soo diray emayl xaqiijin ah oo leh faahfaahinta khidmadda safarkaaga. Habka ugu wanaagsan ee loo yareeyo raadinta waa inaad ku qorto magaca shirkadda diyaaradda baarkaaga raadinta sanduuqa, oo aad dhex marto. Iimaylada ayaa badiyaa ku dari doona "sumcadda safarka" ama "sii -haynta" ee maaddada mawduuca.
Ku Samee Faahfaahin Hawada
Markaad heshid emaylkaaga, waa inay jiraan tilmaamo ku saabsan sida loo galo websaydhka diyaaradda oo dib loogu qorto sumcadda safarkaaga. Halkaas waxaad sidoo kale ka hubin doontaa inta deyn aad leedahay iyo goorta ay dhici doonto.
Wac Kooxda Adeega Macmiilka ee Airline
Ikhtiyaarkan ayaa laga yaabaa inuu u baahdo saacad ama laba taleefanka. Haddii aadan hubin inaad leedahay amaah iyo in kale inaad isticmaasho waxaa wanaagsan inaad la hadasho wakiilka adeegga macmiilka ee diyaaradda. Magacaaga iyo lambarka xaqiijinta asalka ah, waxaad awoodi doontaa inaad isticmaasho deynta aad ka tagtay.
Marka deynta safarkaagu dhammaato, dib looma soo celiyo. Haddii aad baajisay ama beddeshay duulimaad labadii sano ee la soo dhaafay, hubso inaad sheegato qiimaha tigidhkaaga aan la isticmaalin kahor intaysan goori goor ahayn.
Ilaa hadda, United Airlines waxay ahayd diyaaradda kaliya ee ugu weyn Mareykanka ee kordhisay qiimaha tikidhada aan la isticmaalin ilaa 31 -ka Diseembar, 2022 -ka.